AFCON 2017: Xulalka Algeria iyo Zimbabwe oo barbaro ku kala baxay, xilli labo jeer uu shabaqa soo taabtay Riyad Mahrez – Gool FM
AFCON 2017: Xulalka Algeria iyo Zimbabwe oo barbaro ku kala baxay, xilli labo jeer uu shabaqa soo taabtay Riyad Mahrez
(Libreville) 15 Janaayo 2017 – Xulalka Algeria iyo Zimbabwe ayaa barbaro 2-2 ku kala baxay, kulan ka tirsan Qeybta (B), xilli labo jeer uu shabaqa soo taabtay Riyad Mahrez.
Xulka Algeria ayaa goolka la horreeyey waxaana u dhaliyey laacibka Premier League ka xamaasha ee Riyad Mahrez 12’daqiiqo qeybtii hore ciyaarta.
Laakiin xulka Zimbabwe ayaa hurdada ka soo kacay isla qeybtii hore, waxaana goolka barbaraha kulankan u dhaliyey 17’daqiiqo Kudakwashe Mahachi, kaasoo kulanka ka dhigay gar isku mid ah 1-1.
Algeria ayaa hoggaanka ciyaarta lagala wareegay waxaana goolka labaad ee kulankan ugu shubay 29’daqiiqo Nyasha Mushekwi, kulanka ayaana lagu kala nastay 2-1 ay gacanta sare ku lahaayeen Zimbabwe.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta xulka Algeria ayaa goolka barbaraha la yimid waxaana dhammaadkii ciyaarta xulkiisa guuldarro ka badbaadiyey 82’daqiiqo laacibka kooxda Liecester City ee Riyad Mahrez, waxaana uu ahaa goolkiisii labaad ee kulankan, ciyaarta ayaana ku soo dhammaatay barbaro 2-2.
Waa kulankii saddexaad oo barbaro ku dhammaada koobka qaramada Afrika, kaddib markii Qeybta (A) kulamadii la ciyaaray ay xulalka Burkina Faso iyo Cameroon oo barbaro 1-1 ku kala baxeen, si la mid ah Gabon iyo Guinea-Bissau oo sidoo kale ku kala tagay barbaro 1-1.
"Barbaro ma ahayn natiijadii aan doonaynay" - Jose Mourinho